Bulloxer: Waa maxay eeyga isku-darka Boxer Bulldog? - Taranka
Iskudarka Ameerikaanka Bulldog Boxer (a.k.a Bulloxer) ma dhameystirmi doono iyada oo aan lagu darin: ilaaliyahaaga koolkoolinta, kan ugu fiican labada adduun.
Bulldog Boxer crossbreed waxaa loo yaqaan cabsi gelin, muuqaal muruq ah laakiin isku dheelitirka taas oo leh kalgacal iyo xiisaha si labadiinuba idiin jeclaadaan oo u maaweeliyaan.
La kulan qaangaarka Boxer iyo Bulldog
Tani waa isku dhafan oo kaa tagi doonta inaad dareento inaad ku guuleysatay jackpot doggie. Aynu aad u eegno eeygan muuqaalka adag.
Halkee buu ka yimid Bulloxer?
Muxuu yahay isku darka Bulldog Boxer?
Faa'iidooyinka iyo Qasaaraha shakhsiyadda Feeryahan Bulldog
Maxaa laga Filayaa daryeelka Bulldog Boxer
Ma eyyo caafimaad qaba?
Halkee laga iibsadaa Feedh Bulldog oo isku dhafan oo eey ah
Liiska xulashooyinka caafimaadka leh ee iskudhafka Bulldog
Kuwa ugu fiican labada adduunba… oo leh cawaaqib xumo daran
Yaan lagu wareerin Dooxada Bulldog , taas oo ah isku-darka Feerka iyo Ingiriisiga Bulldog. Bulloxer waa isku darka Boxer American Bulldog.
Bixiyeyaashu waxay u badan tahay inay Bulloxer ku barbaariyeen inuu yeesho eey caqli badan, oo cabsi galiya.
Labada waalidba waxay ka yimaadeen nasiib darro nasiib daro ah oo ku saabsan dagaalkii qarnigii 19aad ee Yurub.
Waalidka Kalsoonida leh ee Bulldog Mareykan ah
La kulan eyda cad ee Mareykanka Bulldog
Bulldog-ka Mareykanka wuxuu ku abtirsadaa Ingriiskiisa Bulldog, kaasoo lahaa nasiib-darro hore oo la soo dhaafay oo loo adeegsaday dagaal iyo dib-u-daadin ilaa isboortigan foosha xun laga mamnuucay 1830-yadii.
Ka dib, kuwa wax soosaara ayaa bilaabay inay miisaska kala rogaan oo ay ku tarmaan eeyahaas sida eeyaha qoyska oo naxariis badan halkii ay ka ahaan lahaayeen dagaalyahannada.
Bulldog-ga Mareykanka wuxuu ku abtirsadaa abtirsiinyadii Mareykanka qarnigii 17aad. Waxay u badan tahay in markii ugu horreysay lagu baray Mareykanka 1800-meeyadii sidii ey ey la shaqeeyaan milkiilayaashooda soo galootiga ah.
Noocani wuxuu la yimid beeralayda u isticmaalay eeyahaas xoogooda iyo maskaxdooda ilaalinta si ay u ilaaliyaan una ilaaliyaan dhulka iyo xayawaanka.
Xisbiga AKC wuxuu u aqoonsan yahay eeyadan inay yihiin qayb ka mid ah Kooxda Adeegga Hantidhawrka Aasaaska .
Dheddigga culeyskoodu waa 60-80 rodol (27 illaa 36 kg), labkuna miisaankoodu waa 75-100 rodol (34 - 45 kg). Waxay xoog ku taagan yihiin 20-25 inji (50 - 64 cm), dheddigga dhammaadka gaaban ee muuqaalkan.
Culeyskooda muruq wuxuu ku ammaanayaa isku kalsoonidooda, iyo sidoo kale xoog iyo adkaysi, maadaama ay mar ahaan jireen eeyo ka shaqeeya beeraha.
Cimriga Bulldog wuxuu ku saabsan yahay 10-12 sano.
Goofy wali cabsi la'aan Waalidka Feeryahanka
Eyga goof feerka ah
Eeyadan macaan ee ciyaarta leh waxay noqdeen nooc caan ah oo taagan dhererkiisu # 14 yahay Caannimada AKC . AKC waxay u aqoonsan yihiin inay yihiin ey ey shaqeeya.
Eeyahaani waxay taariikh ahaan kasoo bilaabeen awoowyaashoodii libaaxa ugaarsadeyaasha ah – way adagtahay in la sawiro gacaliyahan macaan ee u muuqda kuwa ugaarsanaya bisadaha waaweyn!
The Feedhyahan waxaan ognahay maanta inay u badan tahay inuu asal ahaan ka soo jeedo Eeyaha Jarmalka Bullenbeisser 1800-yadii. Waqtiyadii dhexe, eeyadan waxay ugaarsan jireen ugaarsi balaaran sida bisinka iyo orsada.
Feedhyahannada waxaa si guul leh loogu adeegsaday eyda militariga, eeyaha daaweynta, daaqa, iyo eeyaha ilaalada. Feeryahanku waa weheliye aan baqdin lahayn, weheliya ilaalin oo ku dhaqaaqa xoog iyo nimco labadaba.
Feeryahan buuxa wuxuu culeyskiisu noqon karaa 65-80 rodol (29-36 kg), iyadoo dheddigga culeyskiisu yahay 15 rodol oo ka yar kan ragga ah. Waxay taagan yihiin 21.5 illaa 25 inji (55-64 cm) oo dherer ah.
Koodhadhka gaagaaban badanaa waa fawn ama brindle oo leh calaamado cad. Cimrigoodu waa 9-12 sano.
Haddii cimrigani kaa niyad jabo, laakiin aad jeceshahay shakhsiyadda Boxer-ka ee ciyaarta, waxaad tixgelin kartaa a Isku darka shaybaarka feerka , sidoo kale loo yaqaan Boxador.
Waa eey dhexdhexaad dhexdhexaad ah leh tamar badan oo jecel in la siiyo iyada oo isku dhafan oo ah laba nooc oo dadaal badan. Cimrigooda ayaa waxyar ka yar kan Bulloxer, 12-15 sano.
La kulan bulldog Boxer-ka - Isha sawirka
In kasta oo inta badan muuqaallada isku dhafan ay adag tahay in la saadaaliyo, Bulloxer-ka ayaa ah mid aan la yaab lahayn maadaama labada waalidba ay leeyihiin astaamo isku mid ah.
Noocani wuxuu caadi ahaan leeyahay dhago gaaban oo jilicsan iyo sanka oo ballaaran, jowly ah. Waxay ruxaan a t feeraha laabta iyo madaxa laba jibbaaran taasi waxay ku sii kordhineysaa muuqaalkooda cabsi gelinta ah.
Dabohoodu waa dherer dhexdhexaad ah laakiin badiyaa xiran. A muuska gaaban leh qunyar socod yar oo ay ka dhaxleen waalidkood Boxer-ka runtii waa cherry-ka dusha sare haddii aad i weydiiso –waxay soo bixisaa goofintooda, jilicsanaanta muuqaalkooda guud.
Eeyadan ayaa kala ah weyn , oo culeyskiisu yahay 70-90 rodol (31-40 kg) dhererkiisuna yahay 22-27 inji (56-69 cm).
Halka kuwani ay yihiin eeyo waaweyn, iyagu waa la qabsan kara nolosha guryaha ilaa iyo inta ay marin u leeyihiin jardiinada ama barxadda u dhow oo ay helayaan qaddarka jimicsi ee habboon.
Koodhka iyo midabka midab-isu-egkan
Eeyadan ayaa sida caadiga ah leh dhar gaaban, oo cufan leh - war wanaagsan oo loogu talagalay milkiilayaasha ugaarsiga ku haya ugaarsiga baahiyaha habeynta dayactirka oo hooseeya.
Inkasta oo ay yihiin daadinta hoose , waa yihiin ma aha hypoallergenic.
Dharkooda ayaa ku imaan doona midabbo sida caddaan, bunni khafiif ah, gogol, ama fawn. Maaddaama Feeryahannadu u muuqdaan inay leeyihiin calaamado cad laabta iyo wejiga, Bulloxer wuxuu dhaxli karaa muuqaalkan casriga ah.
Eyga Ilaalada Jilicsan: Faa'iidooyinka
Waxay leeyihiin muuqaal cabsi gelin leh iyo sameynta eeyaha ilaalada u fiican maadaama ay si aan caadi aheyn u ilaalinayaan milkiilayaashooda.
Ha u ogolaan muuqaalkooda adag inuu ku khiyaaneeyo –waxay yihiin tuulmooyin waaweyn oo mushxarado ah oo u caabuday sayidyadooda oo si gaar ah u yihiin debecsan iyo bukaanka carruurta leh.
La kulan iskudhafka Boxer Bulldog - Isha sawirka
Caqligooda ayaa iyaga ka dhiga si fudud loo tababaran karo oo waxaa laga yaabaa inay si dhakhso leh ula qabsato tababarka adeecida hore ee lagama maarmaanka ah iyo isdhexgalka bulshada si ay uga caawiso in hogaamiyahooda maskaxdu xirmo la maamuli karo. Tababbarka guji waa xulasho aad u fiican noocyadan.
Waxay yihiin saaxiibo madadaalo, firfircoon si ay ula ciyaaraan maalintii. Waxay yihiin ciyaartooy dabiici ah!
Wixii fikrad fiican ah ee ku saabsan sida ay eeyahaasi u madadaalanayaan, ka daawo fiidyowgan Kimble, oo ah Bulldog Mix Mareykan ah oo leh hibo muusiko:
Bulloxer ama cagaf ?: Qasaarooyinka
Eeyadan laguma kalsoonaan karo guriga keligood muddo dheer. Waxay noqon karaan kuwo wax dumiya haddii ay caajisaan - ka hadlaan taxane fallaagoobay!
Noocyada iskutallaabta ayaa u nugul kala-go'id walaac , taas oo noqon karta sababta dabeecadahaan . Way ku adag tahay iyaga inay aqbalaan inaad soo laabanayso markii aad tagayso – waxay doorbidi lahaayeen inaad adigu iska yeesho 24/7.
Bulldog Boxers waxay u baahan yihiin wax ka badan milkiile; waxay u baahan yihiin madax. Iyagu waa kuwo aad u xoog badan oo haddii aadan kalsooni ku qabin, ay xukumi doonaan –ama ay kugu rogi doonaan adiga.
Bulloxer wuxuu yeelan karaa tamar ka badan inta uu xamili karo. Waxay heli karaan isku dhac weyn, boodboodaya iyo hareeraha. Marka, in kasta oo ay ku wanaagsan yihiin carruurta, haddana waa in aan looga tegin feejignaan la'aan.
Eeyadan ayaan laga yaabaa inay is fahmi waayaan eeyaha kale ee waaweyn, sidaa darteed haddii aad leedahay dad kale oo reerkaaga ah ama aad qorsheyneyso inaad eeyo badan ku haysato gurigaaga, noocani ma noqon karo mid adiga kuu gaar ah.
Qurxinta Dayactirka Yar
Eeyahaani waa kuwo iska yar dayactir hooseeya okayna way ku fiicnaan doontaa cadayashadooda toddobaadkii hal mar iyo sidoo kale maydhashada kaliya markii loo baahdo.
Dharka gaagaaban dartiis, eeyahaas uma dulqaadan karaan xad dhaaf xaaladaha cimilada qabow.
Nadiifinta ilkaha ee joogtada ahi waa lama huraan. Fikrad ahaan, tan waa in la sameeyaa maalin kasta. Laakiin ku bilow cadayan sida ugu macquulsan – eeyaha qaarkood neceb tan!
Qaar badan oo eyda iska leh waxay u muuqdaan inay iska indha tirayaan hareerahooda canine, laakiin nadaafad darrada ilkaha ayaa sababi kara wax badan arrimo culus sida cudurada wadnaha.
Ha iloobin dhagahaaga Bulloxer! Ku nadiifi iyaga usbuuciiba hal mar suufka iyo xalka dhagta u gaarka ah ee eyga si looga fogaado wax soosaarka, oo sababi kara infekshin.
Maaddaama eeyahaani jecel yihiin inay ordaan xilliga ciyaarta, waxaa muhiim ah in fiiro gaar ah loo yeesho ciddiyaha. Waxay si fudud u jabi karaan taas oo aan noqon karin mid xanuun badan laakiin sidoo kale keeni karta infekshan.
Baahiyaha Jimicsiga Ciyaaraha ah
Bulloxers waa eeyo firfircoon oo u baahan 30-45 daqiiqo oo ah ciyaar firfircoon maalin si loo ilaaliyo xooggooda, jimicsiga dhiska.
Waxaan rabaa in aan ogaado in eeyaha xabadka waaweyn u nugul yihiin a xaalad halis ah loo yaqaan 'bloat', oo badanaa laga keeno dhaqso u cunida xaddi badan oo cunto ah ama jimicsi badan isla marka la cuno ka dib.
Sababtaas awgeed, waa muhiim inaad siiso bulloxer-kaaga waxoogaa waqti dheefshiidka ah (30 daqiiqo -1 saac) kadib markay wax cunaan kahor intaadan u oggolaan inay ku ordaan.
Cunto Jecel Cunto Dog
Iskudhaf buuxa oo Feedh Bulldog ah ayaa loo baahan yahay 3-4 koob oo ah cuntada qalalan maalintii, u kala-bax 2-3 cunto.
Eeyahaani waxay u nugul yihiin arrimaha wadajirka ah, si loo hubiyo in la soo qaato cuntada eyga oo hodan ku ah fiitamiino iyo labadaba chondroitin iyo glucosamine .
Eeyadan ayaa kala ah u nugul buurnida, markaa ku dhegayso jadwal quudin adag oo yaree cunnada fudud, oo leh dheelitirnaan caafimaad leh oo xagga cuntada ah iyo jimicsi ah.
Feeryahannadu waxay leeyihiin baahiyo gaar ah, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la quudiyo cunno u gaar ah Feeryahan.
Crossbreeds waxay dhaxli kartaa mid ka mid ah arrimaha caafimaadka waalidkeed. Xaaladda Bulloxer, labada waalidba waxay leeyihiin liis dheer oo khatar caafimaad ah oo ay tahay inaad ka digtoonaato, sidaa darteed baaritaanka hore ee arrimahan ayaa muhiim u ah tallaabooyinka kahortagga iyo daaweynta hore.
Taas macnaheedu maahan in Bulloxer aad jeceshahay ay lama huraan ku dhamaan doonto dhibaatooyinkan caafimaad, laakiin had iyo jeer waxaa ugu wanaagsan in laga feejignaado fursadaha wacyi gelinta.
Feedhyahannadu waxay u nugul yihiin khataro caafimaad oo waaweyn sida kansarka (sidoo kale ku badan Bulldogs) iyo suuxdin. Kuwa kale waxaa ka mid ah:
arrhythmogenic midigta wadnaha wadnaha
Cudurka myelopathy ee xumaada
Bloat, sidaan soo sheegay, taas oo khatar weyn ku ah eeyaha waaweyn ee xabadka leh.
Bulldogs waxay leeyihiin liistadooda cajiibka ah ee halista caafimaad. Tan iyo markii ay yihiin Brachycephalic eeyaha, waxay u nugul yihiin arrimaha la xiriira sankooda gaaban sida dhibaatooyinka neefsashada iyo kuleylka.
Bulldogs waxay u nugul yihiin xasaasiyadda iyo arrimaha maqaarka ee kala duwan, sida cambaar . Waxay sidoo kale la ildaran yihiin arrimahan:
Cudurka Lafdhabarta oo xumaada
gariir madaxa idiopathic
Bulloxer-ka celceliska cimriga, iyadoo la tixgelinayo nolosha gaaban ee labada waalid iyo liiska dharka lagu dhaqo ee arrimaha caafimaad ee suurtagalka ah, waa nasiib darro kaliya 10-15 sano.
La kulan Feedhka Bulldog ee isku dhafka ah - Isha sawirka
Nasiib darro, noocyo badan oo isweydaarsi ah ayaa ku dhammaada hoyga. Waxaan kaa codsanayaa: korsasho; ha dukaameysan! Waxaa jira in badan oo daacad ah, eeyo caafimaad qaba oo u qalma guryo wanaagsan.
Ikhtiyaarrada kala-bixiyaha haddii aad u baahan tahay
Haddii aad gabi ahaanba ka iibsaneyso abuure, waxaan kugula talin lahaa inaad horey u sameyso cilmi baaris aad u badan isla markaana aad weydiiso su'aalaha saxda ah - kuwa badan oo ka soo baxa ayaa ah kuwo si qarsoodi ah u eg dhallaanka eyda.
Su'aalaha qaarkood si aad u weydiiso qof abuuri kara waa:
Maxay yihiin habraacyada dalabka korsashadaada iyo shuruudaha?
Xagee ka keentaa eeyahaaga?
Maxay yihiin hababka baaritaankaaga caafimaad?
Waa kuma takhtarkaaga xoolaha ka shaqeeya?
Maxay yihiin habraacyada dabagalkaaga iyo shuruudahaaga kadib korsashada? Noocee ah ilaha dabagalka ah ee aad isiin doonto?
Imisa jeer ayaad adigu ama aabbe iyo aabbe ka soo saari doontaa qashinkan? (tani waa su'aal muhiim ah sababta oo ah jawaabta masuul kasta, abuur bixiye sumcad leh ayaa noqon doona oo keliya mid waqtiga.)
Eeyaha Bulloxer caadi ahaan waa $ 900- $ 1000. Qiyaasta qashinka Bulloxer caadi ahaan waa 6-10 eeyo yaryar oo la jeclaan karo.
Waa kuwan qaar ka mid ah sumcadaha Bulldog iyo Boxer oo aan helay:
Bangiyadaha Inner Boxers ee Blounts Creek Farm (Waqooyiga Carolina)
Dibiga Jiid Bulldog Mareykan ah (Maryland)
Mustaqbalka Grand American American Bulldog (Ohio)
Samatabbixinta Isku-dhafka Bulldog Boxer
Waxaan helay dhowr badbaadin sumcad leh oo aad ka heli karto iskudhafyadan la jeclaan karo .Waxaa laga yaabaa inaad ka heli karto midkood noocyada badbaadinta ee Bulldog ama Boxer.
Samatabbixinta Feeryahan Nolol Cusub (NJ)
Samatabbixinta Feedhyahannada Ohio
Samatabbixinta GO Boxer
Bulshada Aadanaha ee Connecticut
Ka dib cilmi-baaris ballaadhan oo ku saabsan labada waalid ee Bulloxer, kuma talin lahaa tan mid ka mid ah xulashada noocyada caafimaadka qaba.
Tani badanaa waxay ugu wacan tahay arrimo caafimaad oo ka yimid waalidkeed Bulldog. Laakiin haddii lagaa dhigo shakhsiyadda xiisaha-jecel iyo ilaalinta ee Feeryahan, markaa waxaad u baahan kartaa inaad iska hubiso qaar ka mid ah iskudhafyada kale ee caadiga ah oo leh shahaadooyin caafimaad oo aad u wanaagsan:
Isku-darka Antebellum Bulldog Boxer - Antebellum Bulldog wuxuu aad ugu eg yahay kan Mareykanka, laakiin wuxuu leeyahay xitaa madax ballaaran iyo mowqif iyo guud ahaan dhibaatooyin caafimaad oo ka yar. Waxay culeyskoodu noqon karaa 55-120 rodol oo istaagi karaan qiyaastii 18-26 inji. Noocani waa dhif iyo naadir in macluumaad yar laga helo iyaga, laakiin cimrigoodu waa 12-15 sano.
Feedhyahan ku guuleystaha Feedhyahan Bulldog - Guul-wade Bulldog waxaa si gaar ah loogu soo barbaaray inuu yeesho mid caafimaad qaba oo Bulldog ah, taas oo u noqotay guul weyn. Waxay yihiin 55-75 rodol dhererkooduna yahay 16-19 inji. In kasta oo ay si dhexdhexaad ah u daadiyeen, kuwan caqliga badan, eeyaha jecel 'cimrigoodu wuu ka dheer yahay Bulloxer-ka 12-14 sano.
Fiiri this caan Victorian Bulldog Boxer isku qasan:
Su’aal ma ahan in Bulloxerku uu yahay mid isku dhafan oo jilicsan iyo ilaalin aan loo dhigmin– laakiin uma maleynayo inay taasi ku filan tahay.
Waxay jecel yihiin dadka mana la qabsan karaan oo keliya xaaladaha nolosha laakiin waxay ilaalin karaan goobtaada iyo carruurta sida ay tahay shaqadooda.
Si kastaba ha noqotee, cimrigooda gaaban iyo caafimaadkoodaba, aniga oo aan si miyir qab ah ugula talin karin-- waxaa laga yaabaa inaad ku dhammaato qalbi jab adiga iyo saaxiibkaa aad jeceshahayba.
67 Dog Doon Oo Si Farxad Leh kuu Ooyi Doona
muxuu eygeygu u ruxayaa
magacyo wanaagsan oo loogu talagalay puppy pitbull dheddigga
shih tzu maltese cimri dherer